Maalinta: Sebtember 4, 2018
Dawlada Hoose ee Magaalo Weyn, ardayda kusii wadan doonta waxbarashadooda sare ee jaamacada Çukurova laga bilaabo maalinta ugu horaysay ee isdiiwaangalinta gaadiidka dadweynaha ayaa sicir-dhimis lagu sameeyay. Dawlada Hoose ee Magaalada Adana, Çukurova University 8 kun [More ...]
Xakamaynta Khatarta ah ee Gaadiidka Burcad-badeedda ee Saruhanli
Waaxda Gaadiidka Dawladda Hoose ee Magaalada Manisa, gaadiidka burcad badeedka ee ardayda Saruhanli iyo adeegyada gaadiidka shaqaalaha oo kormeer lagu sameeyay. Xakameynta halka kontaroolada lagama maarmaanka u ah lagu fulinayo, dacwad ciqaabeed ayaa lagu dabaqayaa kuwa sameeyay gadiidka ka baxsan wadada. [More ...]
Macluumaadka loogu talagalay Baagagga Xaddidan ee Kocaeli
Dowladda Hoose ee Magaalada Kocaeli waxay sii waddaa howlaheeda si loo yareeyo dhibaatada baarkinka loona xalliyo dhibaatada taraafikada. Si loo yareeyo culeyska taraafikada ee Baqdaad iyo Turan Gunes Avenues, oo ah labada waddo [More ...]
Kocaeli D-100 wuxuu u shaqeeyaa si loo yareeyo marinka magaalada ee Isgoyska Köseköy. Isgoyska mashruuca ee ay fuliso Dowlada Hoose ee Kocaeli waa mid kamid ah qodobada ugu muhiimsan D-100 sababtuna tahay xiriirkeeda xarunta degmada Kartepe. [More ...]
Khadka Irmak Zonguldak Km: 368 + 448 â € ™ Dhismaha Dhismaha Wadooyinka Tareenka ee Gobolka. Agaasimaha Adeegga Iibsiga ee Gobolka (TCDD) 2 / 2018 [More ...]
Isbeddelka ku yimid heerka sarrifka ayaa sidoo kale saameyn ku leh waaxda saadka. Guddoomiyaha UTİKAD Emre Eldener, oo sheegay in farqiga u dhexeeya sarrifka lacagaha lagu muujiyo qiimaha xamuulka ee dhulka, gaadiidka badda iyo hawada, ayaa ah xudunta R Rift Freight -. sarrifka bangiga [More ...]
KarabÃ¼ksporâ € sp kafaalasho ugu weyn KarabÃ¼k Demir iyo steel steel (KARDEMÄ Ä R) A.Å. KARDEMÄ ° R A.Å. laga bilaabo KARDEMÄ ° R AS, oo leh in ka badan kun saamiyadood oo ah 100, kaasoo ah mid si guud loo ganacsadey oo laga ganacsadey isweydaarsiga saamiyada. ee loogu talagalay 80 [More ...]
Tareenka Kosovo oo laga saaray: 2 Dhimasho, 4 Injured
Tareenka rakaabka ah ayaa ku dhacay gaadhigii doonayey inuu ka gudbo heerka isgoyska Drenas. Qofka 2 ayaa lagu dilay gaariga halkaas oo uu tareenka ku leexiyay dhowr mitir, labo ka mid ah waxaa si xun u dhaawacay cunugga 4. Shil shalay 18: 48â € D Drenasâ € [More ...]
Inta aan ognahay, aaladaha Burulaş own own have tools own have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have have Dhanka kale, wadaaga khidmadaha laga soo uruuriyay nidaamka lacagaha basaska dadweynaha ayaa had iyo jeer ahaa mawduuc laga doodo. Macnaha guud, ilaa maanta BurulaÅŸ [More ...]
Mecidiyeköy-Mahmutbey Mashruuca Mitrooga Dhameystiray Boqolkiiba 90
Dhismaha dhulka hoostiisa, kaas oo yareynaya daqiiqadda 2014 inta u dhaxaysa MecidiyekÃ¶y iyo Mahmutbey, kaas oo soo socday ilaa iyo 26, wuu dhammaaday, 90 wuxuu dhammaaday dhammaadka khadka 2018. furmi doonaa. Ka bilaabmida KabataÅŸâ € iyo MecidiyekÃ¶y-Çaðlayan-KaÄŸÄ ± thane-Nurtepe-AlibeykÃ¶y-YeþilpÄ ± nar-Veyselkarani-AkÅŸemsettin-Kazım ± Karabekir-Yenimahalle-Karadeniz Xaafadda-Tekstilkent-YÃ¼ Qaado wadada ¶ztepe Mahallesi-Mahmutbey [More ...]
Ololaha Saxeexa ee Dhibaatada Gaadiidka
Ololaha saxeexa, oo lagu bilaabay Change.org, wuxuu dalbanayaa in la dhiso tareen hoosaad, jidad ku yaal ama jid-gooyo si loo xalliyo dhibaatada taraafikada ee Çanakkale. Maqaalka ololaha saxiixa ayaa la bilaabay; Dhibaatada ugu weyn ee 'anakkale' waa dhibaatada guud [More ...]
RayHaber 04.09.2018 Warbixinta Shirka
Khadadka Tram Lines Asphalt iyo Plow Mix Construction Irmak Zonguldak Line Km: 368 + 448 ayaa laga gudbi doonaa Kayseri-Border Line Km: 475 + 250 ayaa la dhisi doonaa Adeegga Kirada Gawaarida ayaa la qaadi doonaa
Gegada Diyaaradaha ee 10 waxaa loo rari doonaa Madaarka Saddexaad muddo sanad ah. 30 lira ee loogu talagalay muwaadiniinta ka imanaya Pendik, masaafada ugu dhow ee ay leeyihiin muwaadiniinta Kemerburgaz [More ...]